Saddexda cusub ee Meizu ayaa halkan jooga! Waxaan kuu soo bandhigeynaa Meizu 15, 15 Plus iyo M15 | Androidsis
Shalay, sidaan horay u saadaalinay maqaalkan, Meizu wuxuu soo saaray seddexdiisa taleefan ee cusub. Waxaan ka hadleynaa Meizu 15, Meizu 15 Plus, iyo M15, sidoo kale loo yaqaan Meizu 15 Lite, nooca ugu yar ee labadi hore ee la soo sheegay.
Waxaa ka mid ah astaamaha iyo qeexitaannada gundhig kasta, waxaan iftiiminaynaa doorashada Meizu ee processor-ka Samsung ee Meizu 15 Plus, iyo laba Qualcomm oo ah qaabka dhexe iyo nooca Lite. Waxaan sidoo kale xoojineynaa qaybta sawirada ee mobilo kasta tan iyo markii shirkadda Aasiya aysan u tudhin qeybtaan muhiimka ah.
Kadib Waxaan ku siineynaa faahfaahinta astaamaha qalab kasta sida ay u kala sarreeyaan uguna hooseeya. Waan bilownay!
1 Qiimaha iyo helitaanka seddexdan mobiles
Meizu 15 Plus waa nooca ugu awooda badan sedexdaan casriga casriga ah, oo waxay ku timid qalabaysan shaashad 5.95-inji ah oo ah AMOLED oo leh 16: 9 QHD xallinta oo ah saamiga dhinaca. Intaa waxaa dheer, qaybteeda gudaha, Qalabkan waxaa ku shaqeeya sideed-core Samsung Exynos 8895 processor (4x Exynos M2 of 2.3GHz + 4x Cortex-A53 of 1.7GHz) oo ay weheliso Mali-G71 GPU, 6GB RAM, 64 / 128GB oo ah kaydinta gudaha ee aan la ballaarin karin, iyo batari awood leh oo aan ka qaadi karin 3.500mAh oo leh taageero loogu talagalay soo-deg deg deg ah.
Dhinaca kale, Waxay leedahay 12MP + 20MP kamarad gadaal leh oo leh OIS iyo EIS, 3X Optical Zoom oo ah dareeraha koowaad, 2X Optical Zoom oo ah kan labaad, shaqada HDR, iyo nidaamka yareynta buuqa ee sawirada cad. Intaas waxaa dheer, waxay leedahay 20 megapixel dareemayaal hore ah oo ku dhex jira tiknoolajiyada aqoonsiga wajiga, dhajinta akhristaha faraha ee awooda inuu kumbuyuutarkan ku furo kaliya 0.08 ilbiriqsi, wuxuu leeyahay microUSB Nooca C, dekedda 3.5mm Jack ee dhagaha, wuxuu leeyahay xiriir 4G LTE, Bluetooth v4.2, WiFi, GPS, cabirkiisuna yahay 153.8 x 78.25 x 7.25mm, culeyskiisuna waa 177 garaam.
Meizu 15 wuxuu ku yimaadaa qalab 16-inch 9: 5.46 AMOLED ah weheliyay Qualcomm Snapdragon 660 oo ah sideed-processor processor (4x Kryo 260 at 2.2GHz + 4x Kryo 260 at 1.8GHz), 4GB RAM, 64 / 128GB of Memory Gudaha, iyo batari 3.000mAh ah oo leh adeegsiin lacag bixin ah oo degdeg ah mCharge 4.0. Intaa waxaa dheer, sida 15 Plus, waxay leedahay dekedda nooca-C microUSB, 3.5mm Jack deked, aqoonsiga wajiga, iyo qalabayn akhristaha faraha. Taleefankan gacanta ayaa cabirkiisu yahay 143 x 72 x 7.25mm, miisaankiisuna waa 152 garaam.
Sida qaybta sawirada, waxay leedahay kamarado la mid ah Meizu 15 Plus, laakiin la'aanta tiknoolajiyada xasilinta EIS, iyo kaliya 2X Optical Zoom oo ku yaal dareemayaasha dambe.
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, waxaan ku leenahay Meizu M15, oo ah walaalka ka yar labada ayaa horey loo soo bandhigay.
Taleefankani wuxuu xambaarsan yahay isla shaashadda 5.46-inji ee Meizu 15 leeyahay, laakiin farqiga u dhexeeya ee aanu ahayn farsamada AMOLED, laakiin waa LTPS LCD, iyo in xallinteeda ay hoos ugu dhacayso 1.280 x 720 pixels (16: 9). Isla mar ahaantaana, Waxaa lagu qalabeeyaa octa-core Qualcomm Snapdragon 626 SoC (4x 53GHz Cortex-A2.0 + 4x 53GHz Cortex-A2.0), Adreno 506 GPU, 4GB oo RAM ah, 64GB oo ROM ah, iyo batari 3.000mAh ah oo leh mCharge 4.0 tikniyoolajiyad degdeg ah. Marka loo eego culeyskiisa iyo cabirkiisa, culeyskiisu waa 145 garaam oo wuxuu cabirkiisu yahay 143.62 x 72.38 x 7.45mm.
Ku saabsan arrinta sawirka, M15 wuxuu leeyahay hal shidma 12 megapixel oo leh furfurnaan f / 1.9 iyo tiknoolajiyadda autofocus Dual Pixel, iyo 20MP hore mid la mid ah labadiisa nooc ee kale ee waaweyn ee leh AI si loo hagaajiyo sawirada.
Qiimaha iyo helitaanka seddexdan mobiles
Meizu wuxuu soo saari doonaa taleefannada casriga ah, si rasmi ah, Abriil 29, taariikhda aan ku heli karno iyaga, xilligan, kaliya suuqa Shiinaha.
Meizu 15 Plus (6GB + 128GB) oo loogu talagalay 3299 yuan (427 euro qiyaastii.)
Meizu 15 Plus (6GB + 64GB) oo loogu talagalay 2999 yuan (389 euro qiyaastii.)
Meizu 15 (4GB + 128GB) oo loogu talagalay 2799 yuan (363 euro qiyaastii.)
Meizu 15 (4GB + 64GB) oo loogu talagalay 2499 yuan (327 euro qiyaastii.)
Meizu M15 (4GB + 64GB) oo loogu talagalay 1699 yuan (220 euro qiyaastii.)
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Saddexda cusub ee Meizu ayaa halkan jooga! Waxaan kuu soo bandhigeynaa Meizu 15, 15 Plus iyo M15